မှန်လူမီနီယံစာရွက် - တရုတ် Hongbao လူမီနီယမ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ
ဒေါသကို: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26
1. နျ Standard အလျောက်ယင်းတို့၏ပို့ကုန်ထုပ်ပိုး, သစ်သား pallets သို့မဟုတ် Kraft စက္ကူနှင့်အတူသစ်သားအမှုပေါင်း;
2. အခြားအထုပ် clients များလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးလုပ်ရမည် CA ။
3. Package ကိုအလွန်ခိုင်ခံ့။
Delivery အသေးစိတ်: 30 ရက်အတွင်း
နောက်ထပ်အသုံးအဆောင်အောင် 1) ။ 2) နေရောင်ခြည်ရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်
4) ပြည်ထဲရေးအလှပြင်ဆင်ရေး: မျက်နှာကျက်, မြို့ရိုး, etc ။
6) ဓါတ်လှေကား decoraction
7) သက်သေလက္ခဏာများ, nameplate, အိတ်အောင်။
ရေခဲသေတ္တာ, မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို, အသံပစ္စည်းကိရိယာများ, etc: 9) အိမ်ထောင်စုကရိယာ။
10) စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်: မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ, MP3, ဦး disk ကို, etc ။
11) နဲ့ LED အလင်း, မီးကာ, ပျံ့သို့မဟုတ်ချောင်းဆီမီးခွက်
ကကိုလှိမ့ကြိတ်ထံမှလာအဖြစ်မှန်ပွတ်လူမီနီယံစာရွက်လူမီနီယမ်၏သဘာဝသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ Hongbao ရဲ့မှန်ပွတ်လူမီနီယံစာရွက်ထုတ်ကုန်အနိမ့်သိပ်သည်းဆနှင့်အလင်းအလေးချိန်မြင့်မားအလင်းပြန်, ကောင်းသောအကျင့်, ခရမ်းလွန်ခြင်းနှင့်နေရောင်ခြည်အလင်းခုခံ, ရာသီဥတုခုခံမြင့်မား elasticity နှင့်ခြွင်းချက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပါအဝင်သတ္တုရဲ့အများအပြားထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။
(1) 1070 မှန်ပွတ်လူမီနီယံစာရွက်
ဒေါသကို: H24, H18
က Surface: တောက်ပ finish ကို
စုစုပေါင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှု 86% ပျံ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု ≤12%
Specular အလင်းပြန် 80%
တင်းမာမှုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ 125N / မီလီမီတာ
တို့လည်းအားထုတ်လျက်ရှိ 105N / mm2
(2) 1085 မှန်ပွတ်လူမီနီယံစာရွက်
လူမီနီယမ် - နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာများ
ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ စုစုပေါင်းရောင်ပြန်ဟပ် Specular
Din 5036-3 လျှံ
စကေး 1-4 အလွိုင်း
(ခိုင်မာသော) min ဆန့ခွန်အား
MPA min Vield ခွန်အား
အီး 1651 Din
5036-3 60 °ရှည်လျားသော 60 ° trans ဆိုတဲ့
စံ 86 86 80 77 15 1 အယ်လ် 99,85 H18 125 105 2
ကြေးမုံပွတ်လူမီနီယံစာရွက်ကျယ်ပြန့် Lighting များအတွက်အသုံးပြုသည်, Decoration, ဗိသုကာ, စားသုံးသူ Electronics.Hongbao လူမီနီယမ်အစဉ်အမြဲအလင်းရောင်နည်းပညာလယ်ပြင်၌အသုံးပြုသော anodized လူမီနီယံဆောင်ခဲ့အာရုံစိုက်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များတွင်ကျနော်တို့အလင်းရောင်အတွက်အတွေ့အကြုံအများကြီးစုဆောင်းခဲ့ကြရတယ်။
ယနေ့ခေတ်လူမီနီယမ်ကျယ်ပြန့်တိုင်းလယ်ပြင်၌အသုံးပြုသောအလွန်ဖက်ရှင်သတ္တုဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ချေးခုခံ, စက်မှုခွန်အားနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ plasticity ၎င်း၏အားသာချက်များရန်, လူမီနီယံအမျိုးမျိုးသောစက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့သင့်လျော်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်မျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာအလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးအစားအားလုံးကိုဖို့လူမီနီယံသက်ဆိုင်သောစေ။